အဲ့ဒီ ညက မြောက်ဥက္ကလာမြို့ကြီး အသံမထွက်ဘဲ ကြိတ်ငိုခဲ့ရတယ် – Shwe Ba
အဲ့ဒီ ညက မြောက်ဥက္ကလာမြို့ကြီး အသံမထွက်ဘဲ ကြိတ်ငိုခဲ့ရတယ်
L K T | April 5, 2020 | Local News | No Comments
မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ် အတွင်း မှာရှိတဲ့ ဆိုက်ကားဆရာ အယောက် တစ်ရာ ကို surprise အစီအစဉ်လေး နဲ့ Buy More အဖွဲ့က လိုက်လှူဖြစ်တယ်။ တစ်ဦးကို ဆန်၊ဆီ၊ဆား ၊ ငရုတ် ၊ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန် ဖြူ ၊ ခေါက်ဆွဲခြောက် ၊ ကုလားပဲ၊ အချိုမှုန့် ၊ ကြာဇံ ၊ ငါးသေတ္တာ၊ အသားတု အားလုံး ၁၂ မျိုး ပါတဲ့ တစ်သောင်းတန် အထုပ်လေး ပါပဲ။
COVID-19 ကြိုတင် ကာကွယ်တဲ့ အနေနဲ့ အိမ်အပြင်ကို ဘယ်သူမှ မထွက်ကြတော့တဲ့ အချိန် မှာ ည ၈ နာရီ အထိ ငါးရာ ပဲ ရသေးတယ်တဲ့….” ဆိုက်ကား အားလား အစ်ကို” ဆိုတော့” ဟုတ်အားပါတယ် ” တဲ့” ဆိုက်ကား ဆွဲရတာ အဆင်ပြေလား” ဆိုတော့အိတ်ကပ်လေးကို လက်နဲ့ ဖိပြီး ငါးရာပဲ ရသေးတယ်တဲ့ အချိန်က ည ၈ နာရီ ကျော်နေပြီ။” အဲ့ဒါဆို လူ မလိုက်ဘူး။ ကျွန်တော် အထုပ်လေးပဲ တင်ပေးမှာ။”
” အစ်ကိုရယ် စားစရာ မရှိလို့ ဆိုက်ကား ထွက်ဆွဲနေရတာ အမှုပတ်အောင် မလုပ်ပါနဲ့ ” တဲ့” ကျွန်တော် ထည့်ပေးချင်တာ ဒီအထုပ်လေးပါ အစ်ကို ” ၁၂ မျိုး ပါတဲ့ တစ်သောင်းတန် အထုပ်လေး ကို မြှောက်ပြလိုက်တယ်။ ဆိုက်ကားဆရာကြီး ယောက်ကျား အရင့်အမာကြီးက ချက်ချင်း မျက်ရည်တွေ ဝဲ ပြီး လက်တွေ တုန်လာတယ်။
ဆိုက်ကားလေးက သူ့သခင် ရဲ့ ရှိုက်သံ ကို လည်ပြန်ကြည့်ရင်း အိမ်ဘက်ကို မျက်နှာမူလိုက်တယ်။ထို့နောက် အိမ်ကို ဦးတည်ပြီး ဒုန်းစိုင်းပြေးသွားတော့တယ်။လမ်းပေါ်မှာ လူတွေ လည်း မရှိပါဘဲကလန်……ကလန်……. အော်လို့သခင် နဲ့ အတူ ပျော်သွားလိုက်တာ………..မြောက်ဥက္ကလာမြို့ကြီး အသံမထွက်ဘဲ ကြိတ်ငိုတဲ့ အထိ ……………အဲ့ဒီည ကျွန်တော် တစ်သောင်းတန် အထုပ်လေးနဲ့ အတူ ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေ ထည့်ပေးလိုက်မိတယ် မျက်ရည်တွေ ကောပဲ ……….
တနလ်ာနေ့ ည (6.4.2020) ဆိုက်ကာဆရာ ဦးရေ ၂၀၀ အတွက် surprise အစီအစဉ်လေး ထပ်လုပ်ဖို့ ရှိပါတယ် လုပ်အား ငွေအား ပါဝင်ကူညီနိုင်ပါတယ်။
မွောကျဥက်ကလာပ မွို့နယျ အတှငျး မှာရှိတဲ့ ဆိုကျကားဆရာ အယောကျ တဈရာ ကို surprise အစီအစဉျလေး နဲ့ Buy More အဖှဲ့က လိုကျလှူဖွဈတယျ။ တဈဦးကို ဆနျ၊ဆီ၊ဆား ၊ ငရုတျ ၊ကွကျသှနျနီ၊ ကွကျသှနျ ဖွူ ၊ ခေါကျဆှဲခွောကျ ၊ ကုလားပဲ၊ အခြိုမှုနျ့ ၊ ကွာဇံ ၊ ငါးသတ်ေတာ၊ အသားတု အားလုံး ၁၂ မြိုး ပါတဲ့ တဈသောငျးတနျ အထုပျလေး ပါပဲ။
COVID-19 ကွိုတငျ ကာကှယျတဲ့ အနနေဲ့ အိမျအပွငျကို ဘယျသူမှ မထှကျကွတော့တဲ့ အခြိနျ မှာ ည ၈ နာရီ အထိ ငါးရာ ပဲ ရသေးတယျတဲ့….” ဆိုကျကား အားလား အဈကို” ဆိုတော့” ဟုတျအားပါတယျ ” တဲ့” ဆိုကျကား ဆှဲရတာ အဆငျပွလေား” ဆိုတော့အိတျကပျလေးကို လကျနဲ့ ဖိပွီး ငါးရာပဲ ရသေးတယျတဲ့ အခြိနျက ည ၈ နာရီ ကြျောနပွေီ။” အဲ့ဒါဆို လူ မလိုကျဘူး။ ကြှနျတျော အထုပျလေးပဲ တငျပေးမှာ။”
” အဈကိုရယျ စားစရာ မရှိလို့ ဆိုကျကား ထှကျဆှဲနရေတာ အမှုပတျအောငျ မလုပျပါနဲ့ ” တဲ့” ကြှနျတျော ထညျ့ပေးခငျြတာ ဒီအထုပျလေးပါ အဈကို ” ၁၂ မြိုး ပါတဲ့ တဈသောငျးတနျ အထုပျလေး ကို မွှောကျပွလိုကျတယျ။ ဆိုကျကားဆရာကွီး ယောကျကြား အရငျ့အမာကွီးက ခကျြခငျြး မကျြရညျတှေ ဝဲ ပွီး လကျတှေ တုနျလာတယျ။
ဆိုကျကားလေးက သူ့သခငျ ရဲ့ ရှိုကျသံ ကို လညျပွနျကွညျ့ရငျး အိမျဘကျကို မကျြနှာမူလိုကျတယျ။ထို့နောကျ အိမျကို ဦးတညျပွီး ဒုနျးစိုငျးပွေးသှားတော့တယျ။လမျးပျေါမှာ လူတှေ လညျး မရှိပါဘဲကလနျ……ကလနျ……. အျောလို့သခငျ နဲ့ အတူ ပြျောသှားလိုကျတာ………..မွောကျဥက်ကလာမွို့ကွီး အသံမထှကျဘဲ ကွိတျငိုတဲ့ အထိ ……………အဲ့ဒီည ကြှနျတျော တဈသောငျးတနျ အထုပျလေးနဲ့ အတူ ခဈြခငျြးမတ်ေတာတှေ ထညျ့ပေးလိုကျမိတယျ မကျြရညျတှေ ကောပဲ ……….
တနလျာနေ့ ည (6.4.2020) ဆိုကျကာဆရာ ဦးရေ ၂၀၀ အတှကျ surprise အစီအစဉျလေး ထပျလုပျဖို့ ရှိပါတယျ လုပျအား ငှအေား ပါဝငျကူညီနိုငျပါတယျ။
အစိုးရနှင့် မြောက်ပိုင်း လက်နက်ကိုင်လေးဖွဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် (COVID -19)ကြောင့် နေရာ အခက်အခဲဖြစ်နေကြောင်း ဦးဇော်ဌေး ပြောကြား